Koonfur Afrika: Boqorka Zulu iyo Awoodiisa
Waxaa dalka Koonfur Afrika toddobaadyadan ka socday weeraro lagu bartilmaameedsanayo dadka Ajenbiga ah, weeraradan ayaa la sheegayaa inay xoogaysteen ka dib markii uu hadal jeediyey boqorka Qowmiyada ZULU.
Haddaba Maanta ayaa la filayaa in boqorku mar kale hadal jeediyo oo uu kaga hadlo weerarada lagu hayo dadka ajnebiga ah. Haddaba Boqortooyada ZULU qaabkee u dhisan tahay? Awoodda Boqorku intee le’eg tahay? Dad intee le’eg ayay xukuntaa?
Su’aalahaas iyo qaar kale waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Raabbi oo ah Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida oo wakhti badan ku noolaa Koonfur Afrika, khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.